के तपाई चिसो याममा पानी कम पिउनुहुन्छ ? यस्ता छन् बेफाईदाहरु – Bannigadhi Today
धनराज साउँद २०७७ पुस १९, आईतबार १९:२२
पानि बिनाको जिन्दगी कल्पना भन्दापनि बाहीरको कुरा हो । तर जाडो समयमा हामीलाई त्यत्ति धेरै पानि पिउन मन लाग्दैन । कति पयको त जाडो होस या गर्मी दुबै मौसममा पानि असाध्यै कम पानि पिउने बानि हुन्छ ।
जाडोमा पानि कम पिउँदा पनि हामीलाई खासै समस्या भएजस्तो लाग्दैन । तर त्यसले शरिरका बिभीन्न अंगहरुमा निकै असर गरिरहेको हुन्छ ।
पानिको कमीले शरिरको पाचन प्रणाली र निष्काशन प्रणालीमा गम्भिर समस्या देखिन सक्छ । त्यति मात्रै होईन मधुमेह , उच्च रक्तचाप , मुटुसंग सम्वन्धित समस्या , ग्यास्ट्रिक , शरिरमा हुने आलस्यता , कब्जियत पानिकै अभाबले हुने गर्दछ । पानिको अभावले मृगौलामा त झनै ठुलो समस्या हुन्छ ।
पानि बढी पिउँदा पनि हाम्रो सरिरमा गम्भिर समस्या देखा पर्न सक्छ । बिज्ञका अनुसार एकै पटकमा धेरै पानि पिउनु खतरनाक हुन्छ । त्यसैले दिनमा बिहान देखि बेलुका सम्म पटक पटक गरेर दुई देखि तिन लिटर पानि पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
यसै बिच आज हामीले मानब शरिरमा पानिको हत्वका बिषयमा बयालपाटा अस्पतालका हार्डजोर्नि बिशेषज्ञ डा. मन्दिप पाठकसंग कुराकानि गरेका छौँ कुराकानिको शुरुमा उहाँलाई हामीले पानि कम पिँउदा मानब शरिरमा कस्ता समस्याको जोखिम बढी हुन्छ भनेर सोधेका छौँ । कुरााकनि डा. मन्दिप…………